Saiye mushambadzi, ndiko kutsvaga kunotyisa. Funga nezvazvo - ibasa redu kugadzira vatungamiriri uye kuvachengeta. Kana isu tichingoshandura chete 4%, saka edu e-c-level vatongi vangangodaro vasina kufara nesu uye vasingade kushandisa bhajeti pane zvatinoita. Kunyangwe iyi nhamba, izvi hazvisizvo zvachose.
Dambudziko rese munyika yanhasi yedhijitari kuenzanisa kutengesa uye kushambadzira. Pachivanhu, aya agara ari maviri akapatsanuka madhipatimendi. Zvisinei kana ivo vari kana vasiri muzera idzva, zvakakosha kuti zvirongwa zvekushambadzira uye zvirongwa zvekutengesa zvienderane uye kuve nehurongwa hwepamutemo munzvimbo kuitira kuti ruoko-rurege rurere uye rwuri panguva. Kushambadzira otomatiki inzira yekuita izvi. Kutengesa kunotumira kushambadza email kero nyowani yekutungamira, kushambadzira kunovawedzera kuhurongwa, iyo yekushambadzira otomatiki inogadzira uye inoteedzera chimiro chemutengi, uye mapato ese ari maviri "ave kuziva" nezve izvo tarisiro iri kuita uye kana vari kuzviita. Izvo hazvisi nguva dzese kufamba kwebasa, asi iri chokwadi hwaro hweiyo inogona kuve nzira inobudirira yekuvhara yakawanda inotungamira yekushambadzira.
Kushambadzira nekutengesa zvakakoshesana zvakaenzana pakushambadzira kwehupenyu - ngatiregei kurwa titange kushanda tiri pamwe chete.
Kukadzi 18, 2013 na1:40 PM
Chokwadi iyi inyaya yandakasangana nayo. Hazvirevi hazvo kuti pane rudo rwakarasika pakati pekushambadzira nekutengesa, asi kuti isu tine zvakakosha zvakasiyana. Kushambadzira (munyika yangu) ndeye metrics uye ROI (zvichida chigadzirwa chekufanirwa kugara tichiratidza kukosha kwedu), nepo kutengesa kunonyanya kunetseka nezvekubatana-kumwe uye kuvhara mutengi wega wega panguva.
Kudimburira kwedu kukuru kuri kungoteedzera funnel zvachose kusvika kukutengesa kwekuvhara maitiro. Ndinogona kuronda madhiri atinounza, asi isu tinofanirwa kuvimba nevashandi vekutengesa kuti vatore uye vatarise mari chaiyo nenzira kwayo, izvo zvisiri izvo nguva dzose. Sanganisa izvo nenyaya yekuti muindasitiri yedu (yakanyanya mubhadharo masevhisi, kazhinji), inotungamira inogona kuuya kubva kune chero nhamba yemazana ekubata, uye kunyatsorovera pasi ROI pane chero chiitiko chinogona kuve chakaoma.
Kukadzi 18, 2013 na2:56 PM
Ndatenda nemhinduro, Tyler! Ndinobvumirana nekutaura kwako pamusoro pezvakakosha zvakasiyana. Ndizvo chaizvo. Asi ndinofunga kuti kana isu tose tikaona kuti kuedza kwedu kuri kushanda kune chinangwa chimwe chete nekuita mabasa akasiyana, saka tinogona kurongedza zvatinokoshesa nenzira iri nani (uye kukohwa mibayiro!).
Sezvo ROI inoenda, ndagara ndichifunga kuti zvaive zvakaoma kuona ROI yekutengesa kana kushambadzira yakazara. Pane zviitwa zvatinoita zvisingaite “price tag” pazviri. Chokwadi, mutengesi anogona kuve nekofi ine tarisiro inokwanisa uye ivo vakangodzvanya, uye ndipo apo tarisiro iyoyo yakafunga kuti vaida kushanda nekambani iyoyo. Asi kutendeuka hakuna kuitika kusvika 2 mwedzi gare gare nekuda kwezvimwe zvemukati kana zvekunze zvinhu. Munyika ye “multiple touch point”, hatizive patakagadzirisa. Ndezvipi zviitiko zvinofanira kuva neROI? Zvose hazvina kujeka uye zvakaoma kuziva.
Kukadzi 18, 2013 na3:36 PM
Ndinobvumirana nazvo. Harisi dambudziko riri nyore kugadzirisa. Maitiro angu ndeekuita ongororo yenhamba kubva kumusoro kwefunnel yako uye kuona kuti ndeapi marudzi ezviitiko anonyanya kukosha kwauri.
Saka, semuenzaniso kana iwe ukati 2% ye organic traffic pane yako saiti inotumira chikumbiro cheruzivo rwakawanda, uye iyo 2%, 30% inozopedzisira yachinja kuita yekutengesa, uye izvo zvinotengeswa zvinosvika zana remadhora, ipapo unogona kuita ongororo fungidzira kukosha kweumwe neumwe muenzi mutsva waunogadzira - chaizvo ROI yakasungirirwa zvakananga kune yako SEO nguva / kuedza.
Wataura chokwadi kuti mapoinzi akawanda ekubata anozviomesera, zvakadaro. Ah, vimba neni - ndinoziva zvese nezvazvo. Asi, ndinofunga isu tinofanirwa kuve neakaenzana kuyerwa kuitira kuti tigone kugonesa maitiro edu, kukwirisa madhora edu, uye nekugadzirisa nguva yedu. (semuenzaniso, tinofanira kupedza gumi maawa ekuwedzera pamwedzi tichishanda paSEO? - zvakanaka regai titarise mutengo unopesana nekudzoka).
Kukadzi 18, 2013 na3:40 PM
Mapoinzi makuru, Tyler. Ndatenda nemifungo yenyu! Ndangokuteverai pa Twitter. Kutarisira kunzwa zvakawanda.